IFNB ivundulula amakhono eMsunduzi – Msunduzi News
IFNB ivundulula amakhono eMsunduzi
Intsha yaseMgungundlovu inikezwe ithuba lokuzibandakanya emidlalweni yobungani kanobhutshuzwayo
UMasipala uMsunduzi, ngesikhathi ubungaza inyanga yentsha, ngezinhlelo zokuthuthukisa ezemidlalo unikeze intsha ithuba lokuzibandakanya nezikanobhutshuzwayo ngaphansi kweThe FNB Football First Legacy Programme.
Amantombazane ase-Edendale Primary adle umhlanganiso ngowezi-2019
Abafana base-Edendale Primary abanqobe umqhudelwano wezi-2019
Lolu hlelo liwukubambisana phakathi kukaMasipala uMsunduzi neFirst National Bank. Lunikeze amantombazane nabafana basePietermaritzburg abadlala ibhola emazingeni aphansi kuze kufike ku-Under 13 no-Under 15 ithuba lokuqeqeshwa abagogode bagunyazwa nguSAFA.
Izifunda ezinhlanu ezibamba iqhaza kulolu hlelo lweqophelo iTohoyandou, iGeorge, iKimberly, Umtata nePietermaritzburg. Isifunda ngasinye siba nomqhudelwano wonyaka ukuvundulula amakhono kubadlali abazoqeqeshwa ngabagunyaziwe abaxhaswa yiFNB ekuqeqesheni kwabo ukuze bathole izimvume zokuqeqesha. Laba badlali baqeqeshwa kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesithathu ngehora lesibili kuze kugamanxe ihora lesine ntambama.
Lezi zingane ziqeqeshwa abaqeqeshi abaziwayo okungoNks uM Khumalo, uMnu uP Hlatswayo noMnu uT Sindane, abaphethwe uMnu uR Harrilal.
Kulo nyaka izikole zikhethwe ngokubamba iqhaza kulo mncintiswano waseMgungundlovu kube yilezi: i-Edendale Tech (amantombazane nabafana), iKwaPata High (amantombazane nabafana), iBisley Park Primary (amantombazane nabafana), iScottsville Primary (amantombazane nabafana), Smero High (abafana), iLaduma High (abafana), i-Edendale Primary (abafana), iPelham Primary (abafana), iCleradon Primary (abafana) neNorthdale Squad.
Ngelanga lomncintiswano amaqembu amaningi ezikole awazange afike. Lokho akuwuthikamezanga umncintiswano njengoba iMuzithusi Primary (amantombazane nabafana), iSiyahlomula High (amantombazane nabafana) ne-Ashdown Primary (amantombazane) bavale izikhala zezikole ezingafikanga.
Lo mncintiswano ububanjelwe eCaluza Sports Centre Soccer Field, lapho bekusebenza uhlelo lomkhumulajezi kubafana kanti emantombazaneni kuwuhlelo lukamacoboshisa. Owamanqamu kubafana ubuphakathi kwe-Edendale Primary neSmero High ogcine unqotshwe yi-Edendale Primary ngelilodwa eqandeni baba ngompetha bowezi-2019.
Owamanqamu emantombazaneni ubuphakathi kwe-Edendale Primary School neSiyahlomula High yanqoba ngelilodwa eqandeni i-Edendale Primary. UNobahle Zulu ube ngumdlali ovelele emantombazaneni kwathi kubafana kwaba nguKhelweni.
Abadlali abaqokwe ngabaqeqeqshi bazomela isifunda uMgungundlovu eGauteng makhathaleni nonyaka. Bekukhona abahlola amakhono abaqhamuka emaqenjini ePremier Soccer League.
Ubuchule bukaTinkler bulondoloze isithunzi soMgungundlovu
AmaZulu ayakhonya eMsunduzi
Previous post: Uthole elinye iqhawe uMgungundlovu kuMovers FC
Next post: Ubuchule bukaTinkler bulondoloze isithunzi soMgungundlovu